Gen.Haftar ‘…Xalka kaliya ee Argagaxisada waa awood Militari” – Balcad.com Teyteyleey
Gen.Haftar ‘…Xalka kaliya ee Argagaxisada waa awood Militari”
Gen.Khalifa Haftar oo hogaamiya ciidamada gacanta ku haya Bariga dalka Liibiya ayaa wadahadal nabadeed u jooga dalka France.
Madaxweynaha France oo dalkiisa ku casumay Xukuumada Caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya iyo xoogaga uu hogaamiyo Gen Khalifa Haftar ayaa ku guuleystay in labada dhinac ay wada saxiixdaan heshiis xabad joojin ah iyagoo ka wada shaqeyn doona doorasha dalkaasi ka dhacda.
Gen.Haftar ayaa isagu gacan militari ka hela dowlada Masar iyo Imaaraatiga ayaa gacanta ku dhigay inta badan magaalooyinka waaweyn ee ku yaal bariga dalka Liibiya, isla markaana dagaalo kula jiray xukuumada midnimo Qaran ee Caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu tahay caasimada Tripoli.
Jeneraalka ayaa sheegay inuu ka dhabeyn doono heshiiska uu ku saxiixay magaalada Paris, balse dhinaca kale ku hanjabay in xalka kaliya ee looga hortagi karo kooxaha kale ee Xagjirka ah ay tahay dagaal iyo awood militari.
Haftar ayaa sheegay in kooxaha kale ee awooda ku leh Liibiya sida Al Qacida iyo Daacish uusan wax waan waan ah la geli doonin balse xalkoodu uu yahay in awood militari lagu muquuniyo. Wuxuu sidoo kale ku daray in uu la dagaalami doono Ikhwaan Muslimiinka Liibiya oo uu ku tilmaamay cadow.
Dalka Liibiya ayaa galay dagaal sokeeye oo burbur baaxadleh geystay tan iyo markii Isbaheysiga NATO cudud militari ku riday xukuumadii Col.Qadaafi, waxaana hada dalkaasi ku sugan awoodo kala duwan oo si weyn siyaasada ugu kala fog, hadalada Gen.Haftar ee hanjabaad ah ayaa u muuqda inay ku socdaan Daacish, Al Qacida oo ku sugan qeybo kamid ah Galbeedka iyo bartamaha dalkaasi, balse hadaladan ayaa sidoo kale ku wajahan ikhwaan muslimiinka oo laftooda awood kuleh Caasimada Tripoli isla markaana xubno kamid ah ku jiraan dowlada Midnimo Qaran.
The post Gen.Haftar ‘…Xalka kaliya ee Argagaxisada waa awood Militari” appeared first on Ilwareed Online.
maxaa kasoobaxey kulankii xalay madaxweynaha iyo laamaha amaanka